IQ Option ပလက်ဖောင်းလမ်းညွှန် | IQ Option Beginners များအတွက်ကိုလမျးညှနျ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ယင်းတွင်ထရေးဒင်း IQ Option အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်ပလက်ဖောင်းအဆင့်
အတူစတင်အသုံးပြုခြင်း IQ option
သငျသညျလာရောက်ပူးပေါင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေ IQ Option ကုန်သည်အဖြစ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျစတင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။
သင်ဤအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားအကြောင်းကိုသေချာမသိကြပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်ဖတ်ပါ IQ Option ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်။
ငါ join မယ်လို့မည်ကဲ့သို့မသိသင့်ရဲ့အနေအထားတွင်တစ်ချိန်ကခဲ့သည် IQ Option။ သတင်းအချက်အလက်အကြှနျုပျ၏သာအရင်းအမြစ်ဟာသူတို့ရဲ့ platform ပေါ်တွင်မရရှိနိုင်သည့်လဲ tutorial ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်လဲ tutorial အများကြီးသတင်းအချက်အလက်ဆံ့မခံခဲ့ပါဘူးဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းတိုးတက်လာပြီ။ ဒီပလက်ဖောင်းနှင့်အတူစတင်ဆီသို့အကြှနျုပျ၏ခရီးအဓိကအားဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားမှတဆင့်ခဲ့ငါသည်ငါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ကောင်းတစ်ဦးငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုငါပြုသကဲ့သို့တူညီဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားချင်ကြဘူး။ ငါသည်ဤအသေးစိတ်လမ်းညွှန် created ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် Read နှင့်သင်ပြုသောအမှုဖွင့်သည့်အချိန်အားဖြင့်ငါသည်သင်တို့တစ်လိုလားသူကုန်သည်ကဲ့သို့ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အလောင်းအစား။
စတင်ခင်မှာ, ကဒီလမ်းညွှန်အပေါ်အလေးပေးသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိမယ့် ယင်းကိုရယူသုံး IQ Option သင့်ရဲ့ PC ကိုမှတဆင့်ပလက်ဖောင်း။ သင်သည်သင်၏ browser ကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုနိုငျသျောလညျး, ငါသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပေးသောနိုင်ပါတယ်ထားတဲ့ app ကိုဒေါင်းလုပ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
သငျသညျတခုဖွင့်လှစ်သေးဆိုရင် IQ Option အကောင့်အောက်တွင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်ခြင်းနှင့်သင်ကအောက်ကတဦးတည်းဆင်တူတဲ့စာမျက်နှာမှ redirected ရပါမည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်, ကောင်းစွာသရုပ်ပြအကောင့်ကိုသုံးပါ။ သင်တို့အားငါကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြု IQ Option သရုပ်ပြသင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီလေ့ကျင့်အကောင့်။
ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကို Select လုပ်ပါ
ပိုင်ဆိုင်မှုရိုးရိုးသင်တို့အပေါ်မှာသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအားလုံးအတွက်စာရင်းနှင့်စတော့ရှယ်ယာ, ငွေကြေး, ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်စည်များပါဝင်သည်ပါတယ်။ အသစ်ကကုန်သည်များအဘို့ငါငွေကြေးအားလုံးနှင့်အတူထွက်စတင်အကြံပြုလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအခြားတူရိယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကနေခြေရာခံများနှင့်အမြတ်အစွန်းပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
ငါကိုသုံးပါလိမ့်မယ် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးကို pair တစုံ ဒီဥပမာမှာ။
EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ကုန်သွယ်ရေးဝင်ရောက်မီက, သင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအနေအထားကိုင်ထားချင်ဘယ်လောက်ရှည်လျားသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးအများအပြားစက္ကန့်ကနေလပေါင်းများစွာအထိနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ကသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာနှင့်သင်တို့အထဲ၌ကုန်သွယ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ်ငွေကြေးအားလုံးနည်းနည်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်လျှင်များသောအားဖြင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံစေသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါများသောအားဖြင့်5မိနစ် 60 မိနစ်အကြားအထိသက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ BTC / အမေရိကန်ဒေါ်လာ (Bitcoin / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ကဲ့သို့သောအလွန်တည်ငြိမ်သောပိုင်ဆိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလျှင်စျေးနှုန်းကအရမ်းအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားဖွယ်ရှိသည်။ ငါကအရမ်းမြန်ဆန်စွာအရောင်းအဝင်နှင့်အထွက်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသူသည်ငါ 15 မိနစ်အောက်မှာ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။
နောက်ကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာရန်။ သငျသညျအောက်ကပုံထဲမှာမွငျနိုငျသကဲ့သို့ငါတစ်5မိနစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အကောင့်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဘက်အစွန်ဆုံးမှာပါ, သင့်ကုန်သွယ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်တစ်ဦးလယ်ပြင်ရှိပါတယ်။ ငါ $ 400 ရိုက်ထည့်ပါ။ IQ Option အလိုအလျှောက်ကျွန်မရဲ့ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်လျှင်အမြတ်အစွန်းအဖြစ်ဝင်ငွေရပ်ပမာဏကိုတွက်ချက်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သော 91% အသုံးပြုခြင်း, ငါသည်ငါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် $ 364 လုပ်ရပ်တယ်။
ကုန်သွယ်ရေးမအောင်မြင်လျှင်ငါသည်ငါ့ $ 400 ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်သတိပြုပါ။
သင့်ရဲ့ခန့်မှန်း (UP သို့မဟုတ်ချ) ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
နောက်ဆုံးခြေလှမ်းသင့်ရဲ့ခန့်မှန်းဝင်ရောက်ပါဝငျသညျ။ ကနေရှေးခယျြဖို့နှစ်ခုရှိပါတယ်။ သင်စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာအနိမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်လျှင် UP သင်ထင်လျှင်စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးသို့မဟုတ်ချမှာပိုမိုမြင့်မားကြလိမ့်မည်။ ငါ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးတစ်စုံတစ်ဦး oversold အခြေအနေဖြစ်သင် RSI ညွှန်ပြချက်ထဲမှာမွငျနိုငျအဖြစ်ပုံမှန်ပြန်ပြန်လာကတည်းက UP ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာ, သင်အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အရှုံးမြှုတ်ရှိမရှိကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအမြတ်ဝင်ငွေလျှင်, သင်၏ account ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏအဖြစ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်သတိပြုပါ။ သင်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းမြှုတ်လြှငျ, ကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုနုတ်ယူသည်။
ဒါဟာပထမဦးဆုံး binary options များမှာခြိမ်းခြောက်ထင်ရသော်လည်းသင်လမ်းညွှန်ကနေမြင်ရပါတယ်အဖြစ်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်အောင်မြင်သောကုန်သည်ဖြစ်လာသို့သွားသောအရာများစွာရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားသငျသညျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီကုန်သွယ်မှုလိုသောပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုလေ့လာခြင်းများပါဝင်သည်။ အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသငျသညျတစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှု၌သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးဆုံးရှုံးကြဘူးသေချာစေရန်လည်းလိုအပ်ပေသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကအောင်မြင်သောဖြစ်လာဖို့အလိုတော်နှင့်အလေ့အကျင့်ကြာပါသည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ရှေ့တော်၌သရုပ်ပြအကောင့်ကို အသုံးပြု. အကြံပြုဒါကြောင့်ဖွင့် အမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ် IQ Option ကုန်သွယ်အကောင့်.
Tags: IQ binary option ကိုလမ်းညွှန်, iq option ဒွိပလက်ဖောင်း, iq option ထို binary ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, iq option အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအကျိုးဆောင်, iq option လမ်းညွှန်, iq option အရင်ကဆိုရင်များအတွက်လမ်းညွှန်, iq option မီးခုံပလက်ဖောင်းထားရန်မည်သို့မည်ပုံ, iq option ရဲ့ login ပလက်ဖောင်း, iq option အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, iq option ပလက်ဖောင်း, iq option ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, iq option ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းရဲ့ login, iq option ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, mt4 ပလက်ဖောင်း iq option, ပလက်ဖောင်း iq option